Ianareo ve ry Jean dia tsy mahay mankasitraka mihitsy fa dia faly ny higidragidra sy hamotika lava eto a ? Io ihany no naha taraiky an’i Jean kely sefonareo izay nipingapinga tsy nahandry ny andro zoma ka nilingilingy nandrodana sy nandrava saingy ireny niaraha-nitazana ireny ny nafitsony. Potika sy rotidrotika i Gasikara ary dia rava koa ny eriretritr’iny boaikelinareo mbola mihevitra ny hanohy hitantana an’i Gasikara noho ny fahitana ny tsiron’izany hoe mitondra izany iny. Raha mba nanaraka ny lalana nizoran’ny olon-drehetra anefa izao mba mety efa tafa sy nahazo ny amboara. Ny tsy fahandrasana ny andro zoma anie ry Jean no tsy nampanidina ny akoho e ! Ny tsy fahandrasanareo ny andro zoma ihany koa no mety hamoizanareo an-dRanorokely, izay efa kotrehin-dRafôrsa mafy ny handetehana azy. Ny hirariantsika ry Jean dia ho afa-bela ihany izy saingy raiso ho adidy ny manitsy azy fa tena mivaona sy miseho azy ho mazàna mihitsy Ranorokely, saingy sendra ny mahery noho izy tamin’ity a ! Mandini-tena no mendrika anareo ka fakafakao tsara ny niafaranareo mianakavy ? Ny fahatongavan-tsainareo no zava-dehibe indrindra ry Jean ka tsy ho zatra ny lalan-dririnina intsony ka mba hahandry ny andro zoma amin’iny sisa a !